I-Ultrasound enamandla ye-Water-in-Diesel Emulsions - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukusetshenziswa kwe-emulsions yamanzi-in-fuel kukhula ngokushesha ngenxa yemithethonqubo yemvelo nokuqinisa ukuncintisana emakethe yokuthutha. I-ultrasonic ubuchwepheshe be-emulsification yenza kube nokusetshenziswa okunamandla kwamafutha, njengamafutha aqinile noma idizili, ngokuxuba amanzi ibe yi-fuel base. Amafutha-amakhemikhali e-ultrasonically emulsified ahlinzekela ukushisa okuphelele nangokwenyuka kokusetshenziswa kwamandla kwezomnotho, kuyilapho kushayela amafutha afana nokukhishwa okuncane!
Ukushisa kwamakhemikhali kudala ukuphazamiseka okunobungozi, njenge-nitrous oxides (NOx), ama-hydrocarboni (HC), i-carbon monoxide (CO), i-carbon dioxide (CO2) kanye ne-particulate matter (PM), isothu nomusi, okulimaza abantu impilo nemvelo. Ukukhishwa kwalezi zingcola kunganciphisa kakhulu ngokufaka amanzi emotweni.
Ukwengezwa kwamanzi angu-5 kuya kwezingu-25 kumaphethiloli, njengamafutha kagesi aphezulu noma idizili, kunganciphisa ukuthuthwa kwemvelo enobungozi obukhulu. Amanzi ajoyiwe anciphisa izinga lokushisa lokushisa lendawo adiabatic. Ucwaningo luye lwafakazela ukuthi ngaleyo ndlela ukukhishwa kwe-NOx kunganciphisa ngo-40%, i-CO2 ngo-5% – 15% no-PM befika ku-90%. Umusi omnyama ovela emzimbeni we-dizeli ungasuswa ngokuphelele njenge uphethiloli ushiswa ngokuphelele.
Ngesikhathi esifanayo, i ukusetshenziswa kukafutha kungaba njalo kuncishisiwe ngo-approx. 5%. Londoloza imvelo bese ulondoloza uphethiloli!
Amakhemikhali angenakuqhathaniswa afaka ama-hydrocarboni ahlanzekile, amafutha angcolile, amafutha aqinile (i-HFO), i-naphtha, i-diesel, i-diesel, amafutha okushisa, ama-biodiesel namafutha yemifino.
Environmental & Izinzuzo zezomnotho:
ukukhishwa kwe-NOx ephansi
ukukhishwa kwe-soot ephansi
ukunciphisa ukusetshenziswa kwephethiloli
ukushisa okukhulu okuphelele
izinga eliphansi lokushisa kwamazinga okushisa
ukungcoliswa okuncane ngaphansi kwebhayili
I-atomization eyinhloko neyesibili e-flame ye-spray ye-fuel emulsified.
I-grafic above ifanisa ukushisa kwe-diesel eqondile kanye ne-emulsion yamanzi-in-diesel (WiDe). I-diesel yamanzi-in-diesel iyashisa kakhulu ukuhlanza. (Chofoza esithombeni ngenhla ukuze ukhulise!)
Emulsions e-Ultrasonic Water-in-Fuel
I-ultrasound amandla i-technology eyaziwa futhi eqinisekisiwe yokwakha imulsion emihle ngobukhulu ngamaconsi emkhatsini we-micron ne-nano. I Ultrasonic Emulsification ubuchwepheshe busekelwe emagodini okugcoba ukugcoba. Nge-ultrasonic cavitation, amanzi namaprotheni amafutha asinciphisa ubukhulu be-nano futhi ahlangene ndawonye ukuze kukhishwe umshini we-fine (nano- / mini-) emulsion. Ukuze i-emulsification e-ultrasonic eline-inline, imifudlana ehlukene yamanzi kagesi kanye namanzi ingashintshwa ngokuqondile ukuze isilinganiso esivamile samanzi nophethiloli kuqinisekiswe.
I-homogenizers ye-ultrasonic ingafakwa ngokuqondile ngaphambi kwepompo ye-injection ukuze i-homogeneous amanzi-uphethiloli emulsion ingafakwa injected ngokushesha ngaphakathi injini futhi ukugcinwa kwe-emulsion yamagesi kuyagwenywa. Uma i-emulsion yamanzi ifakwe egumbini lokushisa, amaconsi amanzi aqhuma ngenxa yokushisa okusheshayo njengoba iphuzu lamanzi abilayo liphansi kakhulu njengamanye amafutha. Phakathi nenqubo yokuphuza amanzi, amaconsi amanzi aqhuma ngendlela encane futhi aphazamise uphethiloli ube ngamaconsi amancane. Ngaleyo ndlela, amanzi-uphethiloli uphuthunyiswe ekamelweni lokushisa ukuze uphethiloli nomoya ekamelweni lokushisa kungcono kuxutshwe futhi uphethiloli lungaba bashiswe ngokuphelele. Amaconsi amancane kakhulu anikezela phezulu okuyizinhlayiyana eziphezulu kakhulu okuholela ekukhonjisweni kwe-oil-oil interface, okuyinto eyenza ngcono i-atomization. Lokhu kwandisa ukusebenza kahle komlilo, ekugcineni kuholele ekubalulekile ukunciphisa izindleko zikafutha, okudlula izindleko ze-emulsification.
Ubuchwepheshe bokuhlanganiswa kwe-ultrasonic yinkqubo ehambelanayo, engakwazi ukuyivuselela kalula kuma-injini akhona. Injini ngokwayo idinga akukho ukuguqulwa.
I-Ultrasonic Cluster ene-120kW inqubo yamandla
I-Ultrasound Emulsion Technology
I Ultrasonic Emulsification ubuchwepheshe busekelwe ku-cavitation nokuxuba okuphezulu kwe-shear. Amagagasi aphakeme kakhulu e-ultrasound ahlangene phakathi kwe-liquid (ingxube yamanzi kagesi) futhi adala ubukhulu be-droplet enhlabeni ye-nano futhi avumele ukukhiqiza emulsions yamanzi amabili-in-amafutha emaphasethi amabili kanye namafutha amathathu angaphakathi kwamanzi emulsions.
CHP – ukushisa okuhlangene namagesi
ivuseleleke kuwo wonke ama-diesel
ubuchwepheshe be-board: ukuhamba kolwandle
Izisetshenziswa ezinamandla ezisezingeni eliphezulu
U-Hielscher unikeza umsebenzi onzima industrial ultrasonic imishini engakwazi ukusingatha imifudlana ephezulu yamafutha – ngisho nase-viscosities ephezulu. I-homogenizers yama-ultrasonic yama-Hielscher yakhiwe ngomsebenzi we-24/7 ngaphansi kwezimo ezinzima. Amasistimu ethu abhekene ne-opharetha-anobungane futhi ahambelanisiwe, angenayo izingxenye ezihambayo, kulula ukufaka nokusebenza futhi azidingi ukugcinwa kwesondlo.
I-ultrasonic emulsion fuel production ingavikeleka ngokuphepha nge-PC noma ukulawula isiphequluli, kanti imifudlana emibili yokondla yamanzi kanye nophethiloli ivumela isilinganiso esilungile sokulinganisela kwamanzi kagesi kanye nomthethonqubo / ukuguqulwa kwenkampani yamagesi ngesikhathi sokusebenza ngokulandela injini yamanje / ijubane.
7 x 1kW amandla e-ultrasonic ama-fuel emulsion
I-ultrasonic emulsification yamanzi-uphethiloli
U-Iwayzy, uSaddam H .; I-Yusaf, i-Talal; U-Al-Juboori, u-Raed A. (2014): Ama-biofuels avela ku-Fresh Water Microalgae Chlorella vulgaris (i-FWM-CV) ye-Diesel Engines. Amandla 7/2014. 1829-1851.
Khan, Mohammed Yahaya; I-Karim, ZA Abdul; UHagos, u-Ftwi Yohaness; U-Aziz, A. Rashid A .; I-Tan, Isa M. (2014): Amathrendi Amanje ku-Emulsion Amanzi-e-Diesel njenge-Fuel. I-Scientific World Journal 2014.
I-Scarpete, uDan (2013): I-Diesel-Emulsion Water, i-Fuel Alterantive Yokunciphisa Ukushisa Kwe-Diesel Engine. Amashini, Ubuchwepheshe, Izinto 7/2013. 13-16.
Amakhemikhali e-Aqua yigama elisetshenziselwa ukushisa ama-emulsified (abizwa ngokuthi ama-emulsion-fuel). Lezo zinhlobo zamafutha zi-emulsions ezakhiwa ngamanzi kanye nokushisa okwenziwe ngamanzi, njengamafutha, uphethiloli, igesi noma idizili. I-emulsions ingumxube othize wezinhlobo ezimbili noma ngaphezulu ezingenayo i-immiscible ehlanganisa isigaba esilalayo nesasakazekayo. I-Ultrasonic emulsification iyindlela enamandla futhi enokwethenjelwa yokukhipha emanzini amanzi namafutha (uphethiloli, okungajwayelekile, idizili njll) ngokudala amaconsi amancane. I-Sonication yilakho ubuchwepheshe obusha bokushisa nokucubungula kwamafutha.
I-ultrasonic izicubu ze-homogenizers zivame ukubizwa ngokuthi i-sonicator yesondlo, i-sonic lyser, i-ultrasound ukuphazamisa, i-grinder ye-ultrasonic, i-sono-ruptor, i-sonifier, i-sonic dismembrator, i-cell disrupter, i-ultrasonic disperser, i-emulsifier noma i-dissolver. Amagama ahlukene avela ezinhlobonhlobo zokusebenza ezingagcwaliseka nge-sonication.